Momba anay - Shaoxing Sich Cosmetics Packaging Co., Ltd.
SHAOXING SICH COSMETICS PACKING LIMITED [Orinasa plastika Yuyao Langrun] dia mpanamboatra matihanina amin'ny vokatra fonosana plastika any Shina, hita ao amin'ny tanànan'i Yuyao. Ny orinasanay dia mandrakotra manodidina ny 1.000 metatra toradroa. izahay factorty matihanina mba hamokatra siny poloney fantsika sy fitoeran-tarehy kosmetika miaraka amin'ny expérience feno. manana mpanjifa an-jatony ao an-trano sy any ivelany isika. afaka manome logo endrika sy bobongolo service.our ny orinasa dia any Zhejiang, Manana birao any Guangzhou koa izahay.
Nandritra ny 10 taona mahery ny fahaizana mitambatra amin'ny famoronana sy ny famolavolana dia nahomby tamin'ny fanomezana ny mpanjifanay vahaolana vahaolana fonosana azo antoka izay miantoka ny fiarovana sy hampiakarana ny toerana misy ny marika eo amin'ny tsena.
Manana famolavolana sy fanaovana ekipa ao an-trano izahay, milina haingon-doko miloko automatique, pirinty lamba vita amin'ny landy ary milina fanaovana hajia mafana ho an'ny fametahana marika sy maodely isan-karazany amin'ny milina tsindrona sy mitsoka. Izy rehetra dia handray anjara amin'ny vokatra avo lenta ary hanaterina haingana kokoa ho an'ny mpanjifanay.
Manolotra fitaovana manokana ho an'ny marika izahay mba hananana hevi-baovao amin'ny tsena. Ny ekipanay injeniera sy mpamolavola ao an-trano dia hanampy anao amin'ny foto-kevitrao, ny asanao, ny asanao ary ny fisehonao. Ny tanjonay dia ny hanampy anao hanome vokatra azo ampiasaina, manavao ary mety amin'ny mpanjifanao. Raha tianao hatao tsara ny fonosanao dia mandehana miaraka amin'ny The SICH Packaging Company.
Tavoahangy fanosotra kosmetika, Polonina tavoahangy mainty, Kaontenera fanosotra kosmetika, Tavoahangy fanosotra amin'ny maso, Kaontenera vovoka kosmetika miaraka amin'ny sivana, Fonosana kosmetika vita amin'ny tavoahangy,